ဆောင်းပါးများ – My Doctor
You are here:Home-All Articles-ဆောင်းပါးများ
By tayzar|2018-01-03T14:53:15+00:00January 3rd, 2018|Categories: All Articles, လူနေမှုဘဝရေးရာ ဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါးများ|
ကိုယ်ဝန် ဘယ်လိုတားကြမလဲ (၃) ကျွန်တော်။ ။ ကဲ ဒါဆို တားဆေးကဒ်နဲ့ သုံးလခံထိုးဆေး အကြောင်းတော့သိသင့်သလောက်သိပြီထင်တယ်။ သူတို့ကတော့ကာလတိုတားနည်းပေါ့။ အခု ကာလရှည်တားနည်းဖြစ်တဲ့ လက်မောင်းတွင်းထည့်ပစ္စည်း အကြောင်းပြောပြမယ်။ အမျိုးသမီး။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ ကြားတော့ကြားဖူးတယ် ဒါပေမယ့် လက်မောင်းခွဲထည့်ရမှာကြောက်လို့ဆရာ။ ကျွန်တော်။ ။ ဟုတ်ပါပြီ ကျွန်တော်အကြောင်းစုံ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြောပြပါ့မယ်။ သူ့မှာက ၅ နှစ်ခံ (Jadelle)၊ ၄ နှစ်ခံ (Sino-implant)၊ နဲ့ ၃ နှစ်ခံ (Implanon) ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျ။ အဲ့ဒီတော့ ကလေးလုံးဝ မလိုချင်တော့ဘူး ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး သုံးနှစ်လောက် တားချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့။
By tayzar|2018-01-03T14:43:31+00:00January 3rd, 2018|Categories: All Articles, လူနေမှုဘဝရေးရာ ဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါးများ|
ကိုယ်ဝန် ဘယ်လိုတားကြမလဲ (၂) ကျွန်တော်။ ။ ကဲ အခုဆိုရင် တားဆေးကဒ်အကြောင်း သိသင့်သလောင်သိပြီထင်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်သတိရတုန်းလေး ပြောလိုက်ဦးမယ် တစ်လမှတစ်လုံးဘဲ သောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဆေး သူများလာညွန်းရင်မသောက်နဲ့ဗျ။ လုံးဝစိတ်မချရဘူး ကိုယ်ဝန်ရသွားလိမ့်မယ်။ သုံးလခံထိုးဆေး အကြောင်းဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ အမျိုးသမီး။ ။ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ တားတဲ့နည်းလမ်း ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအကုန်သိတော့ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ့် နည်းကိုရွေးလို့ရတာပေါ့ဆရာ။ ကျွန်တော်။ ။ သုံးလခံထိုးဆေးကပရိုဂျက်စတင်(progestin) လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းဆေးတစ်မျိုးတည်းဘဲပါတယ်။ အဲ့တော့ နို့တိုက်မိခင်တွေမှာလည်း ထိုးလို့ရတယ်။ပြီးတော့ တားဆေးကဒ်လို မူးတာပျို့တာရင်တုန်တာ သိပ်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် သူကနည်းနည်း ဝလာတတ်တယ်။ အမျိုးသမီး။ ။ ဟုတ်လားဆရာ တော်တော်များဝလာတတ်လို့လား။ ကျွန်တော်။ ။ ဆေးကြောင့်ဆိုတာထက် ဝိတ်တက်လွယ်တဲ့ ချိုလွန်းတဲ့အစားအသောက်တွေ
By tayzar|2018-01-02T13:57:16+00:00January 2nd, 2018|Categories: All Articles, လူနေမှုဘဝရေးရာ ဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါးများ|
ကိုယ်ဝန်ဘယ်လိုတားကြမလဲ (၁) Oral Contraceptive Pills မနက်ပိုင်းဆေးခန်းဖွင့်ချိန် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် စုံတွဲတစ်တွဲ ဆေးခန်းတွင်းသို့ဝင်လာသည်။ ကျွန်တော် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ လာပါ။ ဘာကူညီပေးရမလဲဗျ။ အမျိုးသမီး ။ ။ ဆရာ ကျွန်မတို့ကအိမ်ထောင်ကျတာ ၅ ရက်လောက်ဘဲရှိသေးတယ်။ အဲ့ဒါ တားဆေးဘာသုံးရင်ကောင်းမလဲလို့ ဆရာနဲ့တိုင်ပင်ချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော် ။ ။ အော် ဟုတ်ပြီ။ ဘာတားဆေးသုံးရမလဲဆိုတာ မဆွေးနွေးခင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့တားလို့ရလဲ။ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေဘာတွေရှိလဲ အရင်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ ညီမ သိသလောက် တားတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပြောကြည့်ပါလား။ အမျိုးသမီး ။ ။ လက်ညှိုး ဆေးကဒ်၊ ဒက်ပိုထိုးဆေး...... အင်း..... ဒီလောက်ဘဲသိတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော်
By tayzar|2017-11-24T11:33:13+00:00November 24th, 2017|Categories: ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါးများ|
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ( Japanese Encephalitis Disease JE D) ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ (JE ) ဟာ၊ကျူးလက်စ် ခြင်ကိုက်ခံရပြီး၊ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး( JE Virus) ကူးစက်ခံရလို့ ဖြစ်လာရတဲ့၊ ရောဂါဆိုးတစ်ခုဖြစ်တယ် ။ အဲ့ဒီခြင်ကိုက်ခံရပြီး၊ ၅-၁၅ ရက်အတွင်းမှာ အောက်ပါတွေ ခံစားလာရတယ်။ လက္ခဏာတွေက ရုတ်တရက်အပြင်းဖျားတယ်။ခေါင်းကိုက်တယ်၊ ပျို့အန်တယ်။စိတ်ရှုတ်ထွေး ကယောင်ကတန်းဖြစ်လာပြီး၊ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ခက်ခဲလာတယ်။ချမ်းတုန်ဖျားလာတယ်။တက်ချက်လာတတ်တယ်။ဦးနှောက်မှာ ရောင်ရမ်းလာတာကြောင့်၊ သတိလစ်မေ့မျောရာကနေ၊ အသက်သေဆုံးတဲ့အထိ၊ ဆိုးရွားလာစေတယ်။အာရုံကြောစနစ်နဲ့ဗဟိုနာဗ်ကြောစနစ်တွေကို၊ ထိခိုက်စေတဲ့အတွက်၊ အသက်မသေခဲ့ရင်တောင်မှနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအဖြစ်၊စကားမပြောနိုင်၊ ကိုယ်လက်မလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း၊နားလေးခြင်း ၊အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည်ဖွံဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း စတဲ့ ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ခြင်းတွေ ကျန်ရစ်ခဲ့စေပါတယ်။ အဲလိုမစွမ်းမသန်လေးတွေ ဖြစ်ကျန်ခဲ့တာကလည်း၊ မိသားစုအပေါ်၊ တာဝန်ပိုကြီးစေတယ်။ ရောဂါက
By tayzar|2017-11-23T14:00:05+00:00November 23rd, 2017|Categories: လူနေမှုဘဝရေးရာ ဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါးများ|
“လူငယ်များနဲ့ HIV အန္တရာယ်” နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဒီဇင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ (World AIDS Day) ကို ကျင်းပလေ့ ရှိကြပါတယ်။ လူထုကြားထဲမှာ ဒီရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပညာ ကြွယ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ကြတာပါ။ ဒီနှစ်မှာလည်း My Health, My Right ဆိုပြီး လူတစ်ယောက်အတွက် ကျန်းမာရေးဟာ အခြေခံအကျဆုံး လူအခွင့်အရေးတစ်ရပ် ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အသိကို လူထုကြားထဲ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိသွားအောင်လို့ ဆောင်ပုဒ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ HIV ပိုးဟာ အရင်နှစ်တွေကဆို တော်တော်လေး လူပြောသူပြောများတယ်။ စိုးရိမ်တကြီး ရှိကြတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ ဒီရောဂါကို လူတိုင်းလည်း
By tayzar|2017-11-23T13:18:27+00:00November 23rd, 2017|Categories: လူနေမှုဘဝရေးရာ ဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါးများ|
မိန်းမသားများ သတိထားစရာ ဆေးခန်းထိုင်ရသည်ဆိုသောအလုပ်က တစ်ခါတစ်ခါမှာ ရင်ကိုလွန်စွာပင်ပန်းနွမ်းလျစေသည်။ ဆရာဝန်ဆိုသည့်ဘ၀မှာလူနာတို့၏သေချင်းတရားကို ထိုင်ဝမ်းနည်းနေ၍လည်းမဖြစ်နိုင်။ ကိုယ့်ရှေ့ မျက်မှောက်မှာပင် သိသင့်တာတွေမသိ၍ အဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်တာ မကြာခဏတွေ့လာရသည့်အခါ တွေများလာတော့ နှလုံးသားက ထုံကျဉ်အေးစက်တတ်နေပေပြီ။ သို့တိုင်ခံစားတတ်သော စိတ်နှလုံး ကိုအလျဉ်ရိုက်ခတ်လာသော အဖြစ်တို့က ရင်ကိုလူးလွန့်ခံစားစေပြန်သည်။ အထူးသဖြင့် အခုတလော တွေ့နေရာသော အမေကြီးဒေါ်အေးမြလိုအဖြစ်မျိုး။ ညနေတစ်ညနေ၏ ပဲ့တင်သံက စိတ်မကောင်းခြင်း များ၏ ရောင်ပြန်ဟပ်နေပါလိမ့်မည်။ အမေကြီးကို စတင်ခေါ်လာသူများက အမေ့သမီးများ။ မိန်းမတစ်သိုက် ပျာပျာသလဲ တွဲခေါ်လာခြင်းခံရသည့် အမေကြီးမှာ သိပ်တော့ ရုပ်မပျက်လှ။ ခပ်ပိန်ပိန်ပေမယ့် အသားနုနု၊ ဖြူဖြူချောချော။ ကိုယ်နေဟန်ကလည်း ခပ်ထည်ထည်ပင်။ မျက်နှာက လည်း သိပ်မပျက်လှ။ ဗိုက်နာလို့ဟု ခုတင်ပေါ်လှဲလိုက်တော့လည်း
By tayzar|2017-11-23T13:10:18+00:00November 23rd, 2017|Categories: လူနေမှုဘဝရေးရာ ဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါးများ|
မိုးမမိဖို့ ကောင်းတဲ့မိုးကာလိုတယ် ဆရာ အခုတလော ပြောတာတွေက ပွဲနည်းနည်းကြမ်းသလားလို့ အေး၊ တချို့ ကဏ္ဍတွေက ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြောမှ နားလည်ကြမှာ။ ယဉ်ကျေးတဲ့ အသုံးတွေ ဆိုရင် ဘာပြောလို့ပြောမှန်း သိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်၊ နောက်ပြီး ဒီအချက်တွေက အခုအချိန်၊ အခုခတ်မှာ သိပ်အရးကြီင်္းပြီလို့ ထင်တ/ယ် ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်တယ်။ ဆရာပြောတာ တချို့ကျွန်တော် မသိခဲ့ဘူး။ တချို့က ကြားဖူးရုံရှိတာ တကယ်ထဲထဲဝင်ဝင် မသိဘူး။ မင်းမပြောနဲ့၊ ၁၉၈၉ လောက်က အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါအတွက် ဆရာဝန်တွေကို စတင် အသိပေး တဲ့ ဟောပြောပွဲမှာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးက ကွန်ဒုံးအကြောင်းပြောပြီး ဘယ်လိုသုံးတယ်၊ နည်းမှန် ဘယ်လိုဆို တာကို ပြဖို့
By tayzar|2017-11-22T12:51:46+00:00November 22nd, 2017|Categories: ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါးများ|
အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါနိဂုံး၏ နိဒါန်း နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလတစ်ရက်နေ့သည် ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့မှာ လူသားထုတစ်ရပ်လုံးအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားမှာ လူ့မျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကို ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည့် AIDS ရောဂါကို အမှတ်ရကြစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ (၂၀၁၁) ခုနှစ် မှ (၂၀၁၅) ခုနှစ်အထိ ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ ၏ဆောင်ပုဒ်မှာ “Getting to zero : Zero new HIV infections. Zero discrimination, Zero AIDS related deaths” ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ သဘောက HIV ပိုးကူးစက်မှုကို သုညဖြစ်သွားအောင်လုပ်မည်။ HIV ပိုးရှိသူများကို ခွဲခြားနှိမ်ချဆက်ဆံခြင်း သုညဖြစ်သွားအောင်လုပ်မည်။
By tayzar|2017-11-22T11:09:25+00:00November 22nd, 2017|Categories: ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါးများ|
AIDS အိတ် စ်ခေါ် ခုခံအားကျဆင်းဝေဒနာရှင်မိခင်များနဲ့ ART ကုထုံးများ ရောဂါပိုးဝင်လို့ဝေဒနာ တစ်ခုခု ခံစားလာရရင်၊ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဋိဇီဝဆေးတွေ နဲ့ တိုက်ဖျက် တားဆီးရတာ၊ ကုရိုးကုစဉ် ထုံးစံဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ မတူတာက၊ အိတ်ခ်ျ အိုင်ဗီခေါ်၊ ခု ခံအားကျ ဗိုင်းရပ်ပိုးဝင်ရောက်ခံရတဲ့အခါ၊ ဗိုင်းရပ်သေဆေး ( Antiretroviral Therapy. ART )ချက်ချင်း မပေးသေးဘဲ၊ သူရဲ့ CD4ခုခံဆဲလ် တစ်မျိုးရဲ့ ပမာဏကို၊ အချိန်မှန်လေ့လာစစ်ဆေးပြီး၊ အဲဒီပမာဏ (ယခင်က ၂၀၀). အခုတော့ (၄၀၀-၅၀၀) အထိ ကျဆင်းလာပြီဆိုမှ၊ (ART ) ဆေးပေးကုသပါတယ်။ ဘာလ်ို့ဆိုတော့၊ ဆေးတွေက
By tayzar|2017-11-20T10:03:05+00:00November 20th, 2017|Categories: ကျန်းမာရေး( က-အ ), လူနေမှုဘဝရေးရာ ဆောင်းပါးများ|
လုံလောက်စွာမအိပ်စက်ခြင်း၏ အန္တရာယ် လူတစ်ယောက်ပုံမှန် စိတ်ကျန်းမာ၊ကိုယ်ကျန်းမာနေစေဖို့ရာ လုံလောက်စွာအိပ်စက်ခြင်းသည် အခြားသောအရာများထက် အရေးပါသော အခန်းကဏမှ ပါဝင်နေပါသည်။ ဒါဆို လုံလောက်စွာအိပ်စက်ခြင်းမရှိလျှင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ? အဖြေဟာ အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဆိုးကျိုးများတာကို သင်တွေ့ရမှာပါ။ ၁) သဘာဝနာရီပျက်ယွင်းခြင်း သဘာဝနာရီဆိုတာ ခန္တကိုယ်မှ ကျန်းမာစေရန် အချိန်မှန်ထုတ်လုပ်ပေးသော ဟော်မုန်းများကို ဆိုလိုပါသည်။ အိပ်ချိန်မမှန်လျှင် ထိုဟော်မုန်းထွက်ခြင်း ကမောက်ကမ ဖြစ်စေပါသည်။ ၂)လေဖြတ်နိုင်ခြေများခြင်း အိပ်ရေးပျက်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်ဆီသွေးရောက်နည်းစေတာမို့ လေဖြတ်နိုက်ခြေများစေတာပါ။ ၃) ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ခြေများခြင်း အိပ်ရေးပျက်ရင် ခန္တာကိုယ်က စိတ်ဖီးစီးခြင်းဖြစ်ပြီး ဟော်မုန်းထွက်လာပါတယ်။ဒီဟော်မုန်းများခြင်း ကြောင့် ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ခြေတက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၄) သွေးတိုးနိုင်ခြင်း၊နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေများခြင်း ပုံမှန်အားဖြင့် အိပ်နေချိန်မှာသွေးကျပြီး နှလုံးကို ဝန်ပိစေခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်ချိန်မှာ ဒါဟာ